I-Owl's Nest Studio Apt. North Asheville
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Ann
Woza uphumule futhi ujabulele ukubukwa okuvela endaweni eyimfihlo ehlolwe kuvulandi, ingadi yezivakashi yangasese enompheme welanga, noma ukusuka ngaphakathi kwe-apt. Ukuzikhethela kungokwakho. Ekupheleni kosuku, yiba nobusuku obupholile embhedeni othokomele osayizi wenkosi. Ukusa kulula ngekhofi, itiye, igranola, noma ukwenza ithosi ngesinkwa esenziwe ekhaya.
Iphasiwedi ye-inthanethi isefrijini futhi ungangena kuma-akhawunti akho owathandayo okusakaza bukhoma. Sihlanza kahle futhi sibulale amagciwane ngemva kwaso sonke isivakashi. Akubhenywa kule ndawo.
Ngokungeziwe ekuhlanzeni kwethu okujwayelekile, sisula zonke izindawo eziqinile ngezinto zokugeza amagciwane futhi sisebenzise isifutho sokubulala amagciwane kosofa, hhayi nje ngenkathi ebandayo neyomkhuhlane, kodwa unyaka wonke, ngemva kwesivakashi ngasinye. WONKE amalineni ombhede ayawashwa ngemva kwesivakashi ngasinye.
Indawo yasekhishini AYINASO isitofu kodwa inosinki, ifriji, i-microwave, ihhavini le-toaster, i-Keurig coffee maker, iketela letiye likagesi, ne-blender. Sihlinzeka ngobisi, ibhotela, nojamu, izigaxa zekhofi, nezinhlobonhlobo zetiye.
5.0(357 okushiwo abanye)
5.0 · 357 okushiwo abanye
Sisendaweni kodwa sijabulela amahektha angu-1.5 entabeni enobubanzi obude, ukubukwa unyaka wonke.
I’m a retired Speech Pathologist enjoying life in beautiful Asheville NC. My husband and I stay busy with our Air B&B, taking classes, gardening, and enjoying all that Asheville has to offer.
Siyatholakala uma kudingeka kodwa i-apt iyimfihlo ngokuphelele kuzivakashi.